I-10 yeGeofumadas kaMatshi 2011-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/10 egeomates March 2011
AutoCAD-AutoDeskGeospatial - GISGvSIGezintshaMicrostation-Bentley
Eli xesha lonyaka lihlala lisebenza kakhulu ekumiselweni kweenguqulelo ezintsha kunye nezisombululo kumcimbi we-geospatial. Apha ndishwankathela ubuncinci i-10 ethe yabamba ingqalelo yam kwiintsuku zokugqibela, iiyure kunye nemizuzu.
ERDAS, unikeza ukuhlaziywa kweJapan kwemifanekiso ye-satellite ngokukhululeka
Bentley Navigator, ebizwa ngokuba yi-Top of innovative products in the application of technologies kwicandelo lokwakha.
Ndiyadumisa, indawo ebalulekileyo i-gvSIG inokuyisebenzisa, kwaye kufuneka ithathe ngaphaya kwayo inokwenzeka kwi-Anglo-Saxon imo.
Izixhobo, ufikelele kwisivumelwano kunye neMilinganiselo yeeMpahla eziNcinci (MDL) kwiziko ngalinye lokuskena laser laser kusuka kwi-SPAR 2011.
Cadastre Spain, sele sele isisombululo esitsha sempendulo yeedadastral idatha ngendlela enkulu.
GvSIG, inguqu ye-RC ye-gvSIG 1.11 ikhoyo ngoku
AUGI, uluntu lwasekuhlaleni lomsebenzisi we-AutoDesk ludlulile amalungu e-200,000 ekupheleni kuka-Matshi 7.
AutoCAD 2012, isungula ngokusesikweni ubungakanani bayo bokuqala, phakathi kwayo inkxaso yamafu, i-BIM kunye nezixhobo zokubhala iimodeli zitsalela ingqalelo.
3D civilIhlabathi le-AUGI lifika nesikhokelo soKwakha oluQinisekayo usebenzisa i-AutoCAD Civil 3D.
Bentley Systems, iya kuqaphela ingqungquthela yewebhu kule 7 ka-Ephreli apho icinga ukubonisa ubunako beBentley Imephu V8i ekuphatheni i-3D yolwazi lweziseko zophuhliso.